I-Mantasoa LAKE CASTLE ... - I-Airbnb
I-Mantasoa LAKE CASTLE ...
Mantasoa, Antananarivo, i-Madagascar
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-José
I-Château du Lac inombono ohlukile wechibi. Uzokubona ezolile futhi induduzo kanye m² 60 pontoon ababezohlala kuyo ngaphezu kwamanzi, ne uhlelo lwayo umsindo, ukukhanyisa yayo eyenzelwe inhlalakahle yakho .... Perfect imindeni enezingane noma amaqembu abangane noma imithwalo yakho emshadweni. Ukuqedwa nokuhlobisa kufundwe ngokucophelela.
Ikhishi likuhlomele ngokuphelele ukulungiselela ukudla kwakho. Ayikho i-wifi
Uzothanda igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yalo yomlilo kanye nosofa aba-3 bakusihlwa eduze komlilo.
Amabhola e-Pétanque onawo kanye nezinduku zokudoba, ibhola lezinyawo, i-badminton, izincwadi nemidlalo yebhodi.
Kukhona isistimu yomsindo - i-CD / SD / USB ne-AUX egumbini lokuhlala, enye isistimu yomsindo enamandla kakhulu ephontoni enakho konke ukuxhumana ngaphandle kwe-CD.
1 umbhede omkhulu, umbhede oyidabulu engu- 1, Umbhede wengane e-1
4.80 · 6 okushiwo abanye
I-Castle inemoto isikebhe sikagesi (ethule kakhulu) 50,000 ar ngehora (max 4 abantu kanye 2 izingane), noma 90,000 ar 2 amahora. Amajakhethi okuphila anikeziwe futhi ayimpoqo.
Futhi unethuba lokuya endaweni yemikhumbi yemikhumbi yaseMantasoa ukuze uthintwe nguwe. Inezikebhe ezinhle ezinamandla futhi ungenza uhambo lokuvakashela ihlathi lasendulo ngama-quads, futhi ungaxhumana nawe.
Abasebenzi bethu bokwamukela izivakashi bahlala esizeni ukuze bakwamukele futhi bakunike okhiye. Bangakwazi ukukulungisela ukudla kwakho kwasekuseni kuphela uma ukwazisa ngosuku olwandulela i-12,000 ar ekhokhwa esizeni (3.5 € ngomuntu ngamunye (kufakwe izingane)
Abasebenzi bethu bokwamukela izivakashi bahlala esizeni ukuze bakwamukele futhi bakunike okhiye. Bangakwazi ukukulungisela ukudla kwakho kwasekuseni kuphela uma ukwazisa ngosuku ol…